Madaxweynaha Jubbaland oo safiiro kula kulmay Nairobi [Sawirro]
NAIROBI, Kenya - Madaxwaynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam [Axmed Madoobe] oo ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa kulamo gaar-gaar ah la yeeshay qaar kamid ah safiiradda dalalka caalamka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya.
Danjirayaasha uu la kulmay Axmed Madoobe ayaa waxay kala yihiin Mareykanka, Sweden, Germany iyo Canada, kuwaasi oo saameyn togan iyo mid tabanba ku leh saaxadda siyaasadeed ee wadanka.
Warar lagu kalsoonan karo oo uu warsidaha Garowe Online helay ayaa sheegaya in shirarkaan layskula soo qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka, gaar ahaan khilaafka kala dhaxeeya maamul goboleedyada dowladda Federaalka.
Axmed Madoobe ayaa ugudbiyey safiiradda uu la shiray tabashooyinka ay ka qabaan dowladda dhexe, oo ay kamid tahay inaanan loo fulin heshiisyo ay kala saxiixdeen oo ay kamid tahay adkeynta amaanka, iyo faragelin ay sheegeen in lagu hayo arrimahooda gudaha.
Illo dhanka diblumaasiyadda ah ayaa sidoo kale tibaaxaya in arrimaha leysla soo qaaday ay kamid tahay doorka ay Beesha Caalamka ku yeelan karto dhex-dhaxaadin ay usameeyaan dowladda Federaalka iyo maamuladda xiriirka ugooyey.
Inkasta oo dowladda horey ucadeysay mowqifkeeda oo ay sheegtay inaanu marnaba aqbali doonin daraf saddexaad soo kala dhex-galo, hadana lama ogga waxa iska bedali kara arrinkaasi, wallow Madaxwayneyaasha dhowr jeer ku gacan-saareen shirar uu Farmaajo ku baaqay.
Dhinaca kale, Madaxtooyadda Jubbaland oo safarka Madaxwayne Axmed Madoobe war-qoraal ah kasoo saartey waxaa lagu sheegay in arrimaha kale oo ay isla soo qaadeen masuuliyiin ay kamid tahay sidii dowladahana ukordhin lahaayeen howlaha degaanada maamulka ka fuliyaan.
Axmed Madobe oo Nairobi kula kulmay Guddiga Dastuurka Soomaaliya
Soomaliya 31.05.2018. 00:05
Kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli Madaxweyne Farmaajo uu ku sugan yahay...
Kenya: Beesha Caalamka uma dhama dalabkii Swan ee doorashada JL
Afrika 20.08.2019. 13:57
Axmed Madoobe oo Kulan qarsoodi ah la qaatey madaxda Garissa
Soomaliya 18.12.2018. 11:38
Soomaaliya: Maxaa looga hadlay Shirkii Gollaha Wasiiradda Jubbaland?
War Saxaafaded 29.03.2018. 14:21
Jubaland oo Kenya kala hadleysa xayiraada alaabta Soomaaliya
Soomaliya 08.06.2019. 10:45
Axmed Madoobe oo markale ku dhawaaqey dagaal ka dhan Al-Shabaab
Soomaliya 27.09.2018. 11:09
Doorashada Jubaland oo tijaabineysa saameynta AU-da ee Soomaaliya
Soomaliya 18.04.2019. 07:31